Abdihakim Olad – Page 7 – Garsoore Sports
Manchester Oo La Saxiixanaysa Dembele Ama Sancho
Manchester United ayaa bartilmaameedsaneysay Jadon Sancho tan iyo xagaagii laakiin weli wax heshiis ah lama gaarin kooxda Borussia Dortmund oo ku aadan saxiixa cayaaryahankan. Sida laga soo xigtay Daily Express, United ayaa...
RASMI: Koox Premier League-ka Cayaarta Oo La Wareegtay Wiilka Berghamp
Kooxda Kubbada-cagta ee Watford ayaa la soo saxiixatay wiilka halyeeyga kooxda Arsenal Denis Bergkamp. Mitchel Berghamp waa cayaaryahan xor ah oo ka socda kooxda heerka labaad ee Wadanka Holland ee Almere City,...
Diego Costa Oo Ku Biiraya West Ham
Weeraryahanka kooxda Athletico Madrid iyo xulka Spain ee Diego Costa ayaa loo soo bandhigay West Ham, sida uu sheegayo wariyaha BeIN Sports Tancredi Palmeri. Warar soo baxay maanta galinkii hore ayaa sheegaya...
RASMI: Brighton Oo La Wareegtay Cayaaryahan Kooxo Badan Ku Raadjoogeen
Kooxda Brighton ayaa dhammeystirtay saxiixa cayaaryahanka aadka loo qiimeeyo ee reer Ecuador Moises Caicedo oo ay kala soo wareegeen kooxda Independiente del Valle. Caicedo waxaa horay u raadinayay kooxaha waaweyn ee Premier...
Daafaca Reds Oo Tijaabada Caafimaadka U Maraya Preston United
Daafaca dhexe ee kooxda Liverpool Sepp Van Den Berg ayaa tijaabada caafimaadka u maraya kooxda Preston United ee heerka labbaad ee dalka Ingiriiska. Sepp Van Den Berg ayaa goordhow yimid magaalada Preston...
Newcastle Oo Dooneysa Willock
Tababaraha kooxda New Castle Steve Bruce ayaa doonaya inuu lasoo saxiixdo maanta, khadka dhexe ee kooxda Arsenal Joe Willock. Heshiiska ay kooxda Newcastle ku dooneyso Willock ayaa ah heshiis amaah ah ,...
Kooxda kubbada-cagta ee Liverpool ayaa dalab ka gudbisay Cayaaryahanka kooxda Marseille Duje Caleta Jar. 24jirkan daafaca uga cayaara kooxda Marseille ayaa aad loola xiriirinayay kooxda Reds waxaana la filayaa inuu maanta ku...
Maanta waa maalintii ugu dambeysay ee suuqa kala-iibsiga cayaartooyda bisha Janaayo. Suuqa waxa uu xirmayaa caawa 2da habeennimo xilliga geeska afrika. Haddaba waxaad halkan hoose si toos ah ugala soco kartaa Wararkii...
Sergrio Ramos ayaa qarka u saaran inuu u dhaqaaqo Manchester United kaddib markii uu go’aansaday in heshiiska uu kula jiro Real Madrid uusan kordhineynin. Waxaana cayaaryahankan uu soo galay lixdii bilood ee...
Ramos Oo United Ku Wajahan, Mustafi >Barcelona, Dembele!!…. & wararkii ugu dambeeyay suuqa.
Suuqa kala-iibsiga cayaartooyda ee bishan Janaayo ayaa maraya maalmihii ugu dambeeyay, maalinta isniinta ee berrito ah ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah suuqa u xirmo, kooxuna waxay ka gaarsiinayaan xiritaanka suuqa...